ပါးကွက် ကျားလေးနဲ့ ချစ်စရာ အလွန်း ကောင်းနေတဲ့ နန်းသီရီမောင် ရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယို – Shwe Naung
ပါးကွက် ကျားလေးနဲ့ ချစ်စရာ အလွန်း ကောင်းနေတဲ့ နန်းသီရီမောင် ရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယို
ပရိသတ်ကြီးရေ ပုံလေးတွေမှာ နန်းတစ်ယောက် ဆွဲဆောင် မှုရှိရှိနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်း နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ လတ်တ လော လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ အမျိုးသား တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကို ခံနေရတာဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များလာတဲ့ မော်ဒယ် အမိုက်စား လေးဖြစ်ပါတယ်။
ချစ် ပရိသတ် ကြီးရေ နန်းသီရိမောင် ကတော့ တိုင်းရင်း သူလေးဖြစ်ပြီး အမိုက်စား အချိုး ကျကျ ခန္ဓာကိုယ် အလှတရားပေါ်လွင် စေတဲ့ အလန်းစားပုံ လေးတွေနဲ့ ပုရိသ တွေ အသည်းနှလုံးကို ဖမ်းစား ထားတဲ့ မော်ဒယ်မလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်တွေနဲ့ အလန်းစား ပုံလေး တွေကတော့ ပရိသတ် တွေ အတွက် ကြွေသွား စေလောက်တာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဖြူဖွေး နေတဲ့ သားရည်နဲ့ သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် လေးတွေ ကြောင့် လည်း ပုရိသ တွေကို ကြွေစေ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နန်းကတော့ သူမရဲ့ ဆွဲမက်စရာ ကောင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှတရားတွေ ကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစား နေလေး ဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှအပ တွေကြောင့် အမြဲအချစ် ပိုစေသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။
သူမက တော့ သာမန်model လေးတစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့ အနုပညာ လော ကထဲဝင်ရောက်လာ ခဲ့ပေမယ့် သူမရဲ့ကြိုးစားမှုတွေ ကြောင့်
အခု အချိန်မှာတော့ အားပေးသူ ပရိသတ်အခိုင် အမာရရှိလာတဲ့ အနုပညာရှင် မလေးတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော မှာတော့ အလန်းစားရိုက်ထားတဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေးကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နှင့် အရမ်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိပီး လှပနေတဲ့ လုလုအောင်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……..
မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…..
လာစားရင် ပြန်စားပစ်မှာ စိတ်ရှုပ်အောင် ဦးနှောက် ပြန်စားမယ် ပြောတာပါ ဆိုပြီးပြောလာတဲ့ ကိတ်လွန်း နေတဲ့ သူမရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်….
ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ နာမည် ကြီးနေတဲ့ DJ SODAရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နှင့် အထာကျကျ လှနေတဲ့ ချောကလျာရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်‌လေးများ……..
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနှင့် ဆက်ဆီကျကျ အလှတရားများ မြင်သာအောင် ပြနေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ပုံလေးများ……
မပေါ်တပေါ်ပိုစ့်တွေပေးပီး ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ၀င်းရွှေရည်သင်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်‌လေးများ…….
သရုပ်ဆောင်ထက်ထက်မိုးဦးက သမီးလေးကို အရမ်းလွမ်းတဲ့ အကြောင်းကို ဝမ်းနည်းစွာ အခုလိုရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့…..
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာများလားဆိုတဲ့ သူမကိုယ်သူမ အပြစ်တင်ကာ ဝမ်းနည်းနေသူ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း……….